MAQAAL DIINI AH ARKAANTA AMA TIIRARKA SALAADDA : | Togdheer News	Home
Connect on Facebook	11:53 pm | Posted by Admin MAQAAL DIINI AH ARKAANTA AMA TIIRARKA SALAADDA :
Walaal akhriste,qormadanu waa qormadii 5naad ee aynu kaga hadlaynay barashada diinta islaamka iyo shareecada ay xambaarsan tahay.Maantana waxaynu baran doonnaa Arkaanta Salaadda. Haddaba, Arkaanta salaadda ama Rugnigu waa fal ama ficil haddii la waayo ama aan lala iman,waxaa la waayayaa ama aan jirayn Ragcadda rugnigaasu ka maqan yahay,arkaanta qaarkoodna haddii la waayo salaaddiiba ma jirto dhammaanteed.Waana kuwan :
Rugniga 1aad : waa niyadda,ama inaad niyeysato salaadda aad tukanayso nooca ay tahay,faral ama sunne.Haddii niyadda la waayo salaaddii ma jirayso dhammaanteed.
R.2aad :waa xidhashada salaadda ama (Allaahu Akbarta u horraysa).Waana inay ku dhacdo taagni,haddiise adigoo sii foorarsanaya aad allaahu akbar tidhaahdo salaaddu kuuma xidhna ee culumadu waxay yidhaahdeen ragcadda taas ku xigta ayey salaaddii u xidhantay,waxaana maqan ragcaddii hore ee uu foorarka ku xidhay
R.3aad : waa Taagnida oo ah in dhabarkaagu kala baxsanaado oo dhanna aanad u qalloocin,haddii aad kari karto,ama sida aad u kari karto inaad isu taagto.
R.4aad : waa Faataxada inaad akhrido oo aad dhamaystirto,haddii aanad la soo kulmin iimaam rukuucsan oo aad ku xidhanayso,haddiise aad la soo kulanto iimaam rukuucsan oo aad ku xidhato salaaddii inta aanu soo toosin,faataxadii aad akhriyi lahayd iimaamka ayaa kaa xambaaraya ee la rukuuc faataxadana iskaga tag,ragcaddaasuna way kuu jirtaa.
R.5naad : waa Rukuucda, oo ah inaad gacmahaaga lawyadaada gaadhsiiso,dhabarkaaguna sinmo,sidii haddii koob biyo ah la saaro dhabarkaaga markaad rukuucsan tahay aanu daateen oo kale.
R.6aad : waa inaad ku xasisho rukuucda, oo macnaheedu yahay inay dhaqdhaqaaqa dayaan xubnahaagu dhammaantood ugu yaraan intaad hal mar subxaanallaahi ka tidhaahdo
R.7aad : waa soo toosidda aad rukuucda ka soo toosto,waana in dhabarkaagu u kala tooso ama noqdo sidii uu ahaa markii aad taagnayd oo kale.
R.8aad : waa inaad ku xasisho taagnida aad ku soo noqotay ee aad rukuucda ka soo noqotay,ugu yaraan qaddar aad subxaanallaahi hal mar ka tidhaahdo in le’eg.
R.9aad : waa sujuudda,waxaana laga sujuudayaa todoba xubnood oo la rabo inay dhulka si fiican u wada haystaan ee aan qaar ama mid ka mid ah kor dhulka looga qaadin markaad sujuudsan tahay,waxayna kala yihiin : Jabhadda ama wajiga,Labada calaacalood ee gacmaha,Labada Law ama jilib,iyo Labada cagood farahooda hore,todobadaas xubnood waa inay dhulka wada haystaan markaad sujuudsan tahay.
R.10naad : waa inaad ku xasisho sujuudda,oo macnaheedu yahay inay xubnahaagu dhaqdhaqaaqa daayaan dhammaantood,qaddar aad subxaanallaahi ka tidhaahdo hal mar in le’eg.
R.11naad : waa fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood,adigoo kolba sidaad u kari karto u fadhiisanaya.
R.12naad : waa inaad ku xasisho fadhigaas labada sujuudood u dhaxeeya,oo xubnahaagu dhaqaaqa daayaan qaddarkaa hore oo kale.
R.13naad : waa Atixiyaadka u dambeeya ee salaadda lagaga baxayo inaad la timaaddo.
R.14naad : waa Fadhiga atixiyaadkaas u dambeeya,oo aad u fadhiisanayso sidaad kolba kari karto.
R.15naad : waa Salliga nabiga (SCW) oo aad ku sallido salliga ugu gaaban ama salliga ugu dheer kaad awooddo adigu ,haddii aad ku salliyi waydana dhamaan salaaddii waa la waayayaa.
R.16naad : waa niyada aad niyooto inaad salaadda ka baxayso,inkastoo culumada islaamka qaarkood ka reebeen arkaanta oo ay yidhaahdeen looma baahna niyo ka bixiseed.
R.17naad : waa ka bixista salaadda ama salaama-naqsiga oo aad dhinaca midigta eegto,eegista dhinaca bidix waa sunne.
Culumada qaarkood Arkaanta salaadda waxay ka dhigaan 13 Rugni,oo afarta xasil ee ku jira meelaha kala duwan ee salaadda ayey Rugni qudha iskaga dhigaan,Rugniga u dambeeya ee niyadda ahna way ka tagaan,qaarna 17kaa Rugni ee aan soo taxay ayey ka dhigaan labaduba waa sax.
Haddaba,haddii aad illowdo oo aad ka tagto hal rugni,sida rukuucda oo kale,oo aad xasuusato adigoo ragcaddii taas ku xigtay ku jira,waxaad ku noqonaysaa rugnigii aad ka soo tagtay oo aad la imanaysaa, markaad salaadda ka baxaysana waxaad la imanaysaa laba sujuudood oo sahwi ah, ragcaddan aad ku jirtayna waa baadil ama ma jirto waayo waxaa jirta qaacido axkaamta ah oo tidhaahda (waxii ka dambeeyey waxii laga soo tagay waa laqwi ama waa baadil aan jirin).
SUNNAYAASHA SALAADDA :
· Suuradda faataxada ka dambaysa ee aad akhriyeysaa waa sunne.
· Atixiyaadka dhexe waa sunne,haddii aad ilowdo oo aad ragcaddii kale u kacdo,looma noqon karo atixiyaadkii,haddaad ku noqotana salaaddii way kaa jabaysaa,haddiise aad xasuusato intaanad si fiican isu taagin oo dhabarkaagu kala wada bixin waad u noqon kartaa.Haddaadse sidaas kaga tagto waxaad la imanaysaa laba sujuudood oo sahwi ah markaad salaadda ka baxayso.
· Afar meelood oo salaadda dhexdeeda ah inaad gacmaha kor u qaaddo oo aad calaacalaha ku fiiqdo dhinaca qiblada waa sunne,waana : markaad salaadda xidhanayso allaahu akbarta u horraysa,markaad rukuucayso,markaad rukuucda ka soo toosayso,iyo markaad atixiyaadka dhexe ka soo kacdo.
· Salaadda subax ragcadda u dambaysa markaad rukuucda ka soo toosto inaad ducada qunuudda akhridaa waa sunne,iyo salaadaha kale haddii roob la’aan ama balaayo kale jirto in qunuudda la akhriyo.
· Salaadda markaad ka baxayso inaad dhinaca bidix eegtaa ama salaama naqsiga bidixna waa sunne.
Wallaahu aclam Wabillaahi towfiiq.
Hurdada Dhammayska Tiran ee Habeenki oo Qofka ka Caawisa inuu Xasuusto Magacyada iyo Wejiyada Dadka
Safaaradda Maraykanka ee Qadar oo ka Cabanaysa Twitter Been-abuur ah oo Lagu Samaystay Magaca Safiirkooda
XIKMADO Necawda jaceylka nacabka jiroo naceybka ka dhowr Qaybta:1
Golaha Wasiirrada J.S.L oo aan u kala hadhin Ansixinta Odoroska Miisaaniyadda Qaranka ee 2016-ka:
Marwo Faadumo Siciid oo Luuqad Diblomaasiyaddeed Bulshada Caalamka ugu Sharaxday….
Guddoomiye Cirro Oo Kullan Dar-dargelin Ah Layeeshay Guddoomiyeyaasha Xisbiga WADDANI Ee Lixda Gobol
Odayaasha iyo Dadweynaha Reer Saaxil Oo Xukuumadda Kulmiye Ku Wargaliyay In Aaaney U Cun-tami-doonin Qorsha-yaasha Ay Ku Gadayaan Buurta Gacan-libaax iyo Dekedda Berbera
DAAWO: Aqoonyahan Cabdirashiid Xasan Mataan Oo Si Wayn Maanta Loogu Soo Dhaweeyay Magaalada Boorama
Ogaysiis Mudanayaasha Golaha Wakiilada Kus Socda
DAAWO: Soo dhawayntii magaaladda Burco loogu sameeyey Xubnaha Isbahaysiga Xisbiga Kulmiye